निर्वाचन मतपरिणाम : नगरमा कांग्रेस, गाउँमा एमाले - Himalayan Kangaroo
निर्वाचन मतपरिणाम : नगरमा कांग्रेस, गाउँमा एमाले
Posted by Himalayan Kangaroo | १८ असार २०७४, आईतवार ०२:०२ |
काठमाडौं । स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचनको पछिल्लो मतपरिणाममा गाउँमा एमाले र सहरमा कांग्रेसले बढी तह जितेका छन् । शनिबार साँझसम्मको मतपरिणामअनुसार कांग्रेसले १० वटा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर जितेको छ भने एमालेले ७ वटा मात्रै नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर जितेको छ ।
एमालेले ५३ गाउँपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएको छ भने कांग्रेस ३२ वटा गाउँपालिकामा मात्रै प्रमुख जितेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले भने अझसम्म रोल्पा नगरपालिकामा मात्रै मेयर र उपमेयर जितेको छ । अन्य दल कसैले पनि नगरपालिकाको मेयर जित्न सकेका छैनन् ।
नगर र गाउँपालिका दुवैमा भने शनिबार साँझसम्ममा एमाले केही अग्रस्थानमा छ । एमालेले ६ नगरपालिकासहित ६० तहमा विजय हासिल गरेको छ भने कांग्रेसले नौ नगरसहित ४२ तहमा जितेको छ । माओवादी केन्द्रले एक नगरसहित २२ तहमा जित आफ्नो पक्षमा पारेको छ ।
कांग्रेसले बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र सल्यशिखर नगरपालिका, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर जितेको छ । त्यस्तै, बाजुराको बडिमालिका, अछामको कमलबजार, भोजपुरको भोजपुर र बझाङको बुंगल नगरपालिकामा पनि मेयर र उपमेयर कांग्रेसले जितेको छ ।
त्यस्तै, एमालेले जयपृथ्वी नगरपालिका बझाङ, मुसिकोट नगरपालिका गुल्मी, पाख्रिबास नगरपालिका धनकुटा, रेसुङगा नगरपालिका गुल्मी, मादी नगरपालिका संखुवासभा र अमरगढी नगरपालिका डडेलधुरामा मेयर र उपमेयर जितेको छ । माओवादीले अहिलेसम्म रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका मात्रै जितेको छ ।
प्रमुख तीन दल बाहेकका अन्य दलले भने अझसम्म कुनै पनि नगरपालिकाको मयेर र उपमेयर जितेका छैनन् । समाजवादी फोरम १ गाउँपालिका तथा जनमोर्चा दुई गाउँपालिका विजयी भएको छ ।
मतगणना जारी रहेका तीन प्रदेशका मुख्य सहरका उपमहानगरपालिकामा पनि कांग्रेस र एमालेबीच नै प्रतिस्पर्धा जारी छ । प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर महानगरपालिकामा कांग्रेसले अग्रता कामय गरिरहेको छ भने इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि कांग्रेसकै अग्रता छ । धरानमा भने शनिबार साँझदेखि एमाले अग्रस्थानमा छ । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ५ को बुटवल, दाङ र घोराई तीनै उपमहानगरपालिकामा एमालेले अग्रता लिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ कै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा भने राप्रपा अग्रस्थानमा छ ।
प्रदेश नम्बर ७ को एउटा मात्रै उपमहानगरपालिका धनगढीमा भने कांग्रेसले ५ सयभन्दा बढी मतले अग्रता कायम गरिरहेको छ ।
मतगणना निकै सुस्त भएकाले उपमहानगरको मतपरिणाम आउन अझै एक साता लाग्ने बताइएको छ ।
तीन दिनसम्ममा उपमहानगरमा करिब १० हजार हाराहारीमा मात्रै मत गनिएको छ । सबै उपमहानगरमा ८० हजारभन्दा बढी मतदाता छन्। शनिबार साँझसम्म प्रदेश नं. १, ५ र ७ का १२१ को परिणाम सार्वजनिक भएको छ । आयोगका अनुसार बाँकी २१३ स्थानमा भने मतगणना कार्य जारी छ । प्रदेश नं. १ को ताप्लेजुङ जिल्ला फातालुङ गाउँपालिकाको मतपेटिका मतगणना स्थलमा आइपुगेकाले शनिबारदेखि नै गणना सुरु हुनेछ ।
शनिबार साँझसम्म कांग्रेसले ८३ र एमालेले ८१ स्थानीय तहमा अग्रता कामय गरेका छन् । माओवादीले २३ र अन्य साना दलले १२ स्थानीय तहमा अग्रता कामय गरिरहेका छन् ।
३५ जिल्लाका १ महानगरपालिका ७ उपमहानगरपालिका १११ नगरपालिका २१५ गाउँपालिका गरी ३३४ स्थानका लागि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट १५ हजार ३ प्रतिनिधि छनोट हुँदै छन् ।
एमाले ६० अग्रता ८१
कांग्रेस ४२ अग्रता ८३
माओवादी २२ अग्रता २३
समाजवादी फोरम १ अग्रता २
जनमोर्चा २ अग्रता १
राप्रपा जित ० अग्रता २
Previousजन्त हिडेका व्यक्ति त्रिशूलीमा बेपत्ता !
Nextमतगणनामा कडाइ !